STOCK FABRICS - Quanzhou Omi Apparel Co., Ltd.
Voalohany, avelao hanazava ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fisafidianana ny lamba avy amin'ny tahirinay na avy amin'ny lamba namboarina.
1, - Ny lamba stockings dia mitovy tanteraka amin'ny lamba namboarina, saingy vitsy ny safidy. Izy ireo dia azo voafantina amin'ny endriny efa vita sy loko ary tsy ambiny. halefa mivantana any amin'ny trano fivarotanay izany. Avy amin'ny PO rehetra dia manomboka manapaka izahay raha vantany vao mahazo ny petra-bolanao.
2, - lamba namboarina, azonao atao ny manome ny firafitra, ny lokony, ny faharetan'ny loko, ny lanjany, ny asany, ny fanodinana, sns, mazàna maherin'ny 5 herinandro, ny lamba vita amin'ny stock dia mila 2-3 herinandro fotsiny, tsy mila confrim maro izy io antsipiriany, ny fotoana manokana dia miankina amin'ny habetsany.
Haingam-pandeha amin'ny serivisy amin'ny tsena
Ny marika fanombohana na ireo izay aleony manafatra kely kokoa & matetika, dia hahita fa ny baiko avy amin'ny tahiry no antony lehibe amin'ny fitomboan'ny marika. Tsotra antony.
Ny fandidiana indray miaraka amin'ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia mila roa volana farafahakeliny. Izahay dia mikendry ny hamoaka ny baiko rehetra amin'ny alàlan'ny lamba fitehirizana ao anatin'ny dimy herinandro. Hafainganana ny varatra izay tsy misy mpamatsy afaka atolotra. Ny fiandrasana am-bolana maro ho an'ny top-up dia mety ho fahafatesan'ny marika tsy misy lisitra, fomba, loko na habe efa tsy hita intsony ary jereo ny mpanjifanao mifindra amin'ny marika hafa hividianana ny vokariny.
Rehefa mihalehibe sy manangana mpanaraka maro ianao dia ho afaka mialoha ny drafitra mialoha ny PO sy ny baiko alainay miaraka aminay ny lamba takianay mba tsy hisy fotoana very amin'ny famokarana miaraka amin'ny lamba fanao.
Miara-miasa akaiky amin'ny marika izahay ary manampy azy ireo handrafitra mialoha ny baiko na ny top top & hiomana ny zavatra & efa nomanina ka rehefa tonga ny tena filaharana dia vonona handeha amin'ny andro hametrahana ny filaminana isika.
1. Ny vanim-potoana tsirairay dia hahita loko vaovao tonga amin'ny fironana; noho izany, havaozina isaky ny enim-bolana ny loko.
2. Raha mangataka lamba tsy ao anaty tahiry ianao, azafady mba ampahafantaro anay, hitady na hitovy izahay.
Lamba amin'ny loko sy lamina tsotra
Eto ambany izahay dia mitanisa lamba maro, loko tsotra na loko mamatotra na lamina pirinty nomerika ho anao. Manome toky anao izany fa ny kalitaon'ireo lamba tafiditra ao anaty akanjonao mavitrika dia ho kilasy avo indrindra manerantany raha oharina amin'ny Lululemon, raha tsy tsara kokoa aza amin'ny fametahana hamandoana, ny famatrarana sy ny toetra mampivoatra ny vatana. Samy azo baverina tsotra sy pirinty.